मध्यपहाडी लोकमार्गः आर्थिक गतिविधि बढ्दै | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
मध्यपहाडी लोकमार्गः आर्थिक गतिविधि बढ्दै
प्रकाशित मिति १६ पुष २०७५, सोमबार ११:०० लेखक नेपाली जनता
तेह्रथुम । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास सुविधासम्पन्न होटल र लज सञ्चालनमा आउने क्रम बढ्दो छ । व्यवसायीले सडक आसपास होटलमा लगानी गर्न थालेका छन् । लोकमार्गको ट्र्याक खोलेर धुले सडकमा सवारी गुड्ने थालेसँगै व्यवसायीले पर्यटक लक्ष्यित रिसोर्ट र होटलहरूमा लगानी गर्न थालेका हुन् ।
सडक आसपासका स–साना बजारहरूमा रहेका होटलहरूले समेत लगानी बढाएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले कालान्तरमा ग्राहकको चाप बढ्ने सोचेर होटलमा लगानी बढाएको उनीहरू बताउँछन । मध्य पहाडी लोकमार्गको करीव १३५ किलोमिटर खण्ड तेह्रथुममा मात्रै पर्छ ।
यो सडक आसपासका बस्तीहरूले समेत बजारको रूप लिने क्रम बढेको छ । सडक आसपासका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू सक्रान्ति, म्याङलुङ्ग, वसन्तपुर, जिरिखिम्ती, लसुनेलगायत बजारहरू तीब्र गतिमा फैलिँदैछन् । यस्तै, सानो बस्तीको रूपमा रहेका चुहानडाँडा, इवा, छातेढुङ्गा, सक्रान्ति, ओयाक्जुङ, इसिवु, हलिमेला लगायत गाउँमा पनि शहरीकरण बढ्दो छ । शहरीकरण हुँदै गरेका ती बजार र पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउँहरूमा होटल र रिसोर्टहरू खोलिएका हुन ।
स्थानीयबासीकै लगानीमा समेत सडक आसपास साना–ठूला होटल, पसल, लज, रिसोर्ट खोल्ने क्रम शुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका इन्जिनीयर सुरेश तुम्बाहाम्फेले बताए । ‘ठाउँठाउँमा ग्रामीण बजारको विस्तार र व्यवसाय गर्नेको सख्या वृद्धि भएको छ’, उनले भने । लोकमार्गको खोरुंगा खोला नजीकै खोरुगा खोला रिसोर्ट खुलेको छ ।
स्थानीय दुई युवा दाजुभाइले ४० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरी खोलेको रिसोर्ट अहिले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूले भरिभराउ हुने गरेको छ । सदरमुकाम म्याङलुङ्ग नजीकै भएकाले पनि साताको शनिबार रिसोर्टमा भीड लाग्छ । खोरुंगामा पौडी खेल्ने, माछा खाने, घुम्ने र रमाइलो गर्नेहरू खोलामा पुग्ने गर्छन् ।
म्याङलुङ्ग र जिरिखिम्ती बजारको मध्यभागमा टुक्रे नजीकै बगाले होटल खुलेको छ झण्डै एक करोड रूपैयाँको लगानीमा । लसुने बजार नजीकै दुई वर्षयता पर्यटक लक्ष्यित कालापानी रिसोर्ट सञ्चालित छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने ट्राउट माछाको व्यावसायिक पालनसहित सञ्चालित सो रिसोर्ट पनि पर्यटकलाई सत्कार गर्न व्यस्त रहन्छ ।
रिसोर्टमा आफूले ५ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेको सञ्चालक धर्मराज खड्का बताउछन् । लोकमार्ग निर्माण हुने भएपछि वसन्तपुर बजारका पेम्बा छिरिङ भोटियाले पनि होटलमा लगानी थपेका छन् । पाँच करोड रूपैयाँ लगानी गरेर होटलमा सुविधा थप गरेको उनले बताए । ‘लोकमार्ग निर्माण हुने भएपछि मानिसहरूको आवतजावत बढ्ने भएकाले होटलमा लगानी थपेको हुँ’, उनले भने ।
लोकमार्गले सदरमुकाम म्याङलुङलाई समेत छोएर जाने भएपछि ब्लु–हेवन होटलका सञ्चालक रोमभगत प्रधानाङ्गले पनि पहिलेको होटल भत्काएर सुविधासम्पन्न होटल निर्माण गरिरहेका छन् । होटलमा तीन करोड रूपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गर्ने र सुविधायुक्त बनाउने तयारी रहेको उनले सुनाए ।
सात वर्षअघिसम्म जिल्लाकै दुर्गम मानिएको तत्कालीन चुहानडाँडा गाविसमा यतिबेला मध्यपहाडी लोकमार्गका कारण निकै चहलपहल छ । बजारमा घरहरू थपिँदा छन । होटल तथा पसलसमेत खुल्ने क्रम जारी छ । यसले एकातिर आर्थिक गतिविधिलाई बढाएको छ भने अर्कोतर्फ बसाइसराई रोकिएको छ । लोकमार्गले छोएका विभिन्न ठाउँमा साना बजारहरू विस्तार भएर व्यापार गर्नेको भीड बढिरहेको आठराई गाउँपालिका–४, इवाका वडाध्यक्ष श्यामकुमार भट्टराईले बताए ।
‘सडक नहुँदा उपभोग्य बस्तु खरिद गर्न पाँचथर पुग्नुपथ्र्यो, अहिले घरदैलोमै सडक आयो,’ उनी भन्छन्, ‘सडकसँगै टोल–टोलमा बजार बनेका छन ।’ आठराई गाउँपालिकाका बासिन्दा लोकमार्गको ट्र्याक खुलेर सवारी नआउञ्जेलसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तु लिनकै लागि डेढ दिन पैदल हिँडेर पाँचथरको फिदिम पुग्थे ।
तर अहिले यहाँबाट दैनिक दर्जनौँ सवारीका साधनहरू फिदिम हुँदै झापा, दमक, विराटनगर र धरानसम्म पनि पुग्ने गरेका सक्रान्तिबजार उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रेम पौडेलले बताए । उनले भने, ‘सडक आएपछि विकासको गति बढ्यो । व्यवसायीले लगानी पनि गर्न थालेका छन ।’ लोकमार्ग आसपास आठराई गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा मात्रै दर्जनौँ होटलहरू थपिएका उनले जानकारी दिए ।
चुहानडाँडामा पछिल्ला दुई वर्षमा १० वटा नयाँ घर निर्माण भएर स–साना होटलहरू सञ्चालनमा आएका स्थानीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक कृष्ण बाँस्कोटाले बताए । सक्रान्ति बजारमा पनि पाँच वटा नयाँ होटल थपिएका छन । लोकमार्गकै इसिवु र ओयाक्जुङ खण्डमा पनि पसल, व्यवसाय र होटल खुल्ने क्रम वृद्धि भएको फेदाप गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष गोविन्द मादेम्बाले बताए ।
सडकको पहुँच वृद्धि भइरहेकै कारण व्यवसाय जम्ने देखेर लोकमार्ग आसपासमा धेरैले होटल व्यवसायमा लगानी बढाएका तेह्रथुम उद्योग वाणिज्य सङ्घका पुर्वअध्यक्ष महेन्द्र काफ्लेले बताए । ‘तमोर नदीले छोएका गाउँ–गाउँमा समेत शहरीकरण हुँदैछ, गाउँमै पनि सानो पूँजीबाटै पसल, होटल र व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू बढेका छन’, उनले भने । लोकमार्गको आसपास पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा एकसय भन्दा बढी साना–ठूला होटलहरू खुलेका छन ।
सडक निर्माणसँगै सवारीसाधनमा आउने यात्रुका कारण लोकमार्ग आसपासका बजार क्षेत्रमा ग्राहकको चाप वृद्धि भएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शिवप्रसाद ढुंगानाले बताए । सडकले गाउँमा व्यापार राम्रो हुने भएपछि गाउँ छाडेर पूर्वी तराईमा व्यवसाय गर्नेहरू पनि गाउँ फर्किन थालेका छन ।
लोकमार्गले गाउँमा बढिरहेको बसाइसराई रोकेको छ भने यहाँ कमाएर जिल्ला बाहिर लगानी गर्नेहरू घटेका छन । नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाट जोड्ने यो सडक खण्ड निर्माणसँंगै गाउँमा विकासको लहर शुरु भएको समन्वय समितिका प्रमुख ढुंगानाको मूल्याङ्कन छ । लोकमार्गले छोएका गाउँमा जग्गाको मूल्यसमेत अकाशिएको छ ।
खुलामञ्चमा डोजर चल्यो ! पसलेको भागाभाग रूवाबासी (फोटो फिचर)
काठमाडौं । महानगरपालिकाले शनिबार दिउँसोदेखि खुलामञ्चमा डोजर चलाएको छ । खुलामञ्चभित्र बनाइएका सटर लगायतका संरचनाहरु डोजरले भत्काउन थालेपछि त्यहाँ…
काठमाडौं । किर्ते कागज खडा गरी कम्पनी अर्कैको नाममा गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा कार्यरत दुई उपसचिवलाई अख्तियार…
साताकाे राशी (चैत २४ देखि ३० गतेसम्म)
मेष – मान सम्मान बढ्नेछ । व्यवसायमा राम्रो योग देखिन्छ । आम्दानीको श्रोत बढ्नाले आर्थिक समस्या टर्नेछ । नोकरीमा…
‘जी हजुरी गरेर ओलीले सबै भारतलाई बुझाए’
धनगढी । प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतसँग झुकेर सबै कुरा दिएको…
म बिस्तारै उहाँको शरीरमा घोडा चढे…. (यौन कथा) 10 views